Chickpeas: Uru, Njirimara na Ntụziaka dị ụtọ!
Alimentos	 19 January 2019
O chickpea ọ bụ ụdị ọka a na -eji ma na -erikarị, ọkachasị ndị na -eso a nri vegan, nke bụ ihe efu nke ngwaahịa anụmanụ. Nke a bụ n'ihi na ọ bụ ọka nwere protein nke ukwuu ma na-enye mkpa protein nke ndị na-enweghị anụ.
N'isiokwu ndị na -esonụ, ị ga -amụta maka isi uru nke chickpeas, yana akwụkwọ nri ị nwere ike iji ọka a mee n'ụlọ. Lelee!
Chickpeas bara ụba na eriri na nke a na -enyere usoro nri nri niile aka ma na -enyere onye ahụ aka ifelata, wepụ abụba na carbohydrates na -achọghị. Tụkwasị na nke a, ike protein ya dị elu na -eme ka ị nwee oke dị larịị, nke ga -eme ka ahụ gị sie ike na ahụike.
Uru ọzọ dị oke mkpa bụ na ọ na -enyere aka iwepu glucose n'ọbara, nke dị mma maka ndị nwere ọrịa shuga ma ọ bụ nwee nsogbu ahụike a. Ọka na -enyere aka n'okwu ndị ọzọ nke sistem obi, dịka iwetulata cholesterol ọjọọ, ọbara mgbali elu na ndị ọzọ.
Ndị nwere nsogbu ọkpụkpụ kwesịrị irikwa ọkụkọ. Ọ bara ọgaranya na nri dị ka calcium na phosphorus nke na-ejigide ike na ntachi obi nke akụkụ ndị a dị mkpa na ahụ mmadụ.
Maka ụmụ nwanyị, iri nri a bụ ihe dị mkpa. Ọka ọka na -enyere aka igbochi mmebi nwa ebu n'afọ, bara ọgaranya na folic acid, na -emejupụta ụlọ ahịa iron nke ewepụrụ n'oge ịhụ nsọ, ma na -enyere aka belata ihe ize ndụ nke ọrịa kansa.
Ị nwere ike ịchọta chickpeas na ụlọ ahịa ndị ọkachamara n'ịre ngwaahịa sitere n'okike na na nnukwu ụlọ ahịa zuru ezu, yana nhọrọ ndị ọzọ. Ọnụahịa ahụ na -agbanwe nke ukwuu site na mpaghara ruo na mpaghara, mana ị nwere ike ịhụ otu kilogram ọka akọrọ na weebụsaịtị maka 12 ruo 15 reais. Ọ dị ọnụ ala ma ọ dị oke mma n'ihi na ọ na -akwụ ụgwọ mgbe emechara gị mmiri.
Chickpeas esi nri
Ụzọ kacha mma isi mee chickpeas bụ ịgbara ya mmiri n'ime mmiri ka o wee too nke ọma ma nyekwa ohere ọzọ na kichin. Ị nwekwara ike sie ya, ma ọ bụrụ na -amasị gị ịme ụdị efere a kapịrị ọnụ.
Na agbanyeghị, ị ga -ebu ụzọ mee ya mmiri. Yabụ, ka ọka gbanye ruo awa abụọ na efere ma ọ bụ efere mmiri. Mgbe nke ahụ gasị, ị nwere ike bido nkwadebe.
chickpeas a asara n'ọkụ
A na -ere ya dịka nri nri n'ụlọ ahịa nri ahụike. Ebe ọ bụ ụlọ mmepụta ihe, ọ na -abịa na ihe eji echekwa ihe, sodium na ihe ndị ọzọ na -adịghị mma, na mgbakwunye na ngwa nri.
Mana ị nwekwara ike tost ma mee nri chickpea nke gị n'ụlọ. Ọ na -atọ ezigbo ụtọ ma na -atọ ụtọ, ọ ga -abụkwa nri ị ga -eri naanị gị ma ọ bụ gị na ezinụlọ gị na ndị ọbịa gị.
Chickpeas a asara n'ọkụ na -arụ ọrụ dị ka ọkụkọ a asara n'ọkụ. Na -asacha ọka ọ Alwaysụ Alwaysụ mgbe niile tupu ị na -eji ya, wee kpoo, mmanụ, ihe na -esi nri na akpọọ nkụ maka ihe dị ka nkeji iri atọ. Ezi nri ga -esi na pan pụta.
Kedu usoro nri kachasị mma?
Ndị na -anaghị eri anụ ka a na -ejikarị eghe eghe dị ka a ga -asị na ha bụ ọrụ anụ. Yabụ na ndị mmadụ na -eri osikapa, agwa, salad, poteto na ọkụkọ kama anụ ehi ma ọ bụ ọkụkọ.
Ya mere, usoro nri kacha mma bụ ndị na -agbanwe chickpeas ka ọ bụrụ ezigbo steak. Nhọrọ kacha mma bụ steak hamburger chickpea.
Ị ga -awụsa agwa n'ime mmiri esi mmiri ọkụ opekata mpe awa atọ wee gbanwee mmiri a na -esi na ofe a ugboro atọ. Ozugbo emechara nke a, ị ga -akpọ nkụ agwa ndị ahụ nwere mmiri mmiri ma debe ya na igwe nrụnye nrụgide ka esi nri. Hapụ ya ka o sie nkeji iri atọ.
Iji mee ka mwepụ nke shei dị mfe, tụba chickpeas na nnukwu efere ma ọ bụ pan ọzọ na mmiri dị oke oyi. Mgbe ahụ, ị ​​ga -ewere chickpeas peeled ma tinye ha na pan iji ghee yabasị na galik. Ị na -agbakwunye ngwa nri na -amasị gị, dị ka turmeric na nnu.
Ngwakọta dị njikere, ugbu a ọ bụ oge ighe chickpeas na mado, tinye obere oatmeal wee kpụọ steak. Ị nwere ike iji steak a rie ya na nri ma ọ bụ hamburger.
Ọ bụrụ na ị masịrị ndụmọdụ ndị a, kekọrịta ederede a na netwọkụ mmekọrịta gị!
Mee ka nri gị dị mfe site na kọlọtọ ahaziri: Hụ atụmatụ anyị!
Amfepramone na-efunahụ ibu? Chọpụta ihe niile gbasara ọgwụ a ebe a!
Etu esi edozi eriri: Esi emega ahụ n'ụlọ? Kedu usoro ọgwụgwọ kachasị mma?
Crepioca: Chọpụta nhọrọ mgbatị ahụ kwesịrị ekwesị ị ga-eme n'ụlọ
Usoro ọgwụgwọ Colic: Hụ ndị kachasị mma!